Baahida sharciga deganaanshuhu waxay ku xiran tahay jinsiyaddaada iyo sababta iyo wakhtiga aad Finland joogayso. Haddii aad tahay muwaadin u dhashay waddan Midowga Yurub ah, Liechtenstein ama Iswitzerland, uma baahnid sharciga deganaanshah marka aad Finland u soo guurayso. Haddii aad tahay muwaadin u dhashay waddan kale islamarkaasna aad doonayso in aad Finland u soo guurto, waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha. Waa in aad Hoggaanka socdaalka ka codsataa sharciga deganaanshaha ka hor inta aad Finland imaan.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogagga Muwaadiniinta u dhashay wuqooyiga Yurub , Muwaadiniinta Midowga Yurub iyo Aan aheyn muwaadin EU.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTulli
Keenista dalka Finland alaabooyinka dibada lagala soo guuroLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Gaadiidka oo sidi alaabta lala soo guuroLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaRuokavirasto
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka mid ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka baxsanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMuuttopalvelu Niemi
Adeegyada guuritaankaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaViktor Ek
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaAlfa Quality Moving
Kaalmada guuritaankaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Inta badan dadka wadanka u soo guurey waxay bilowga degaan guryo kiro ah. Waxaa haboon in raadinta guryaha kirada ah waqti loo qabsado, ugu yaraan hal bil. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi: Guriyeynta .
Haddaad u soo guurto Finland si rasmi ah, waxaa laguugu diiwaan gelinyaa in degaankaagu yahay Finland. Deegaankaaguna wuxuu noqonayaa degmada, aad ku nooshahay. Mar haddii degan tahay degmadaasna, waxaad xaq u leedahay adeegyada ay bixiso degmadaas, sida tusaale adeega daryeelka caafimaad ee dadweynaha. Waxaad ka ogaan kartaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow, in lagugu diiwan gelin karo degaankaaga inuu noqdo Finland. Ka aqriso wixii dheeriya bogga InfoFinlandi Guri degmo ee gudaha Finland .
Marka aad Finland u soo guurto, waa in Kelada ka codsataa Kaarka Kelada. Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay helitaanka manfacyada bulshada, haddii Finland u deggantahay si joogto ah islamarkaasna aad buuxiso shuruudaha kale ee lagu helo manfacyada. Xaqaada manfacyada bulshada waxaa la qiimaynayaa, marka aad codsato. Haddii aad Finland ka shaqeyso, laakiin aadan si rasmi ah u deganeyn, waxaa laga in aad xaq u leedahaya manfacyada bulshada qaarkood.Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland wuxuu ku jira bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finland .
Haddaad degan tahay maagalada shardi ma aha inaad yeelato gaari. Gaadiidka daweynuhu si fiican ayuu uga shaqeeyaa Finland. Tareenada iyo laymanka basaska ku dhowaad meel kasta oo Finland ah ayaad ugu safri kartaa. Magaalooyin badan sidoo kale waxaad ku tegi kartaa duulimaad. Magaalooyinka waa weyn iyo kuwa u dhow waxaa ka jira gaadiid deegaaneed si fiican u shaqeeya. Gaadiidka deegaanku waa inta badan basas. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg bogga InfoFinlandi Gaadiidka gudaha Finland .
Ku haysashada dalka Finland kaarka darawalnimada ee wadamada dibada laga soo qaatayLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Luuqadaha Finnishka iyo Swidishku waa luuqadaha rasmiga ah ee dalka Finland. Aqoontooda waxay kaa caawinaysaa inaad fahamtid bulshada cusub, waxayna kuu sahlaysaa xalinta arrimaha. Barashada luuqada Finnishka ama Swidisku waxay ku xiran tahay, labada luuqadood hadba midda looga hadlo magaalada aad degan tahay. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Swidishka .
Xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha ayaad caawimaad uga heleysaa shaqo raadinta. Shaqada waxaad ka raadsan kartaa internetka iyo joornaalada. Sidoo kale shaqo waxaad ku heli kartaa adigoo si toos ah ula xiriira shaqo bixiyaha aad xiisaynaysid. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqo ka raadinta Finland InfoFinlandi Shaqo ka helista Finland .
Macluumaadka la xiriira suurto galnimada waqtiyada firaaqada iyo hiwaayadaha waxaad ka helaysaa bogga InfoFinlandi Waqtiga firaaqada .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaExpat Finland
Macluumaadka Finland ee ajaaniibta loogu talagalayLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa